African Tourism Ministers vanotsunga kusimbisa kushanya kukondinendi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Ministers vanotsunga kusimbisa kushanya kukondinendi
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • Namibia Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Makurukota eAfrica kuburikidza nemusangano weUNWTO akavimbisa kuti nyika dzemu Africa dzichashanda pamwechete kutanga nhoroondo nyowani yezvekushanya mukondinendi yose.
Nhengo dzeUNWTO dzemu Africa dzinotsigira pamwe chete Windowek Pledge yekutsigira Brand Africa.
Makurukota eAfrica anobvumirana kushanda pamwechete kuti vawane mhinduro yekumutsiridza kushanya kweAfrica.
Pasi pechisungo cheWindhoek Pledge, nhengo dzichabatana vese vane chekuita neruzhinji uye vekunze vekambani pamwe nenharaunda dzemunharaunda kuti vavake rondedzero nyowani inokurudzira yekushanya mukondinendi yese.
Makurukota eAfrica akabvuma kushanda pamwechete kuti vawane mhinduro yekumutsiridza kushanya kweAfrica kwakawirwa zvakanyanya neECVID-19.
Ivo makurukota vakaita chiziviso neChina mumusangano wavo wekubatana ku United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) Brand Africa Summit yakaitirwa muWindhoek, Namibia.
Chivimbiso ichi chakanangana nekuona zvirinani kugona kwekushanya kuitisa kupora, vakadaro kuburikidza nemubatanidzwa.
"UNWTO nenhengo dzayo dzichashanda zvakare neAfrican Union pamwe nevemasangano akazvimirira kusimudzira kondinendi kune vateereri vepasi rose vane tariro yepasirese, nyaya dzevanhu-dzakanangana nekupa mucherechedzo unoshanda," yakadaro UNWTO mumusangano uyu.
Nekushanya kwakazivikanwa sembiru yakakosha yekusimudzira nekusimudzira kwe Africa, UNWTO yakagamuchira nhumwa dzepamusoro kumusangano wekutanga wedunhu wekusimbisa Brand Africa.
Musangano uyu wakaratidza kutora chikamu kwehutungamiriri hwezvematongerwo enyika hwenyika yakatambirwa yeNamibia, pamwe nevatungamiriri veveruzhinji nevemasangano akazvimirira kubva kukondinendi yese.
Pasi pechisungo cheWindhoek Pledge, nhengo dzichabatana nevose vanobatana munharaunda nevekunze pamwe nenharaunda dzemunharaunda kuti vavake rondedzero nyowani inokurudzira yezvekushanya mukondinendi yese, vakadaro maMinister.
Chirongwa chezviitiko zvemusangano weGurukota rezveKushanya muAfrica chaive chasanganisira mharidzo, hurukuro dzekukurukurirana, pamwe nekushanya kwehunyanzvi kwakarongwa neNamibia Tourism Board iyo yakabata chiitiko ichi.
Musangano uyu wanga wafukidza zvinangwa zvikuru zvishanu. Chinangwa chekutanga chaive chekusimudzira kushanya senzvimbo yekucheka-cheka ine hunyanzvi pakushambadzira kwenyika nedunhu, kusimudzira chimiro chenzvimbo dzekuAfrica sezvivakwa zvemufananidzo wese weAfrica.
Chinangwa chechipiri chaive chekubatanidza veruzhinji nemasangano akazvimirira pamwe nenharaunda dzemunharaunda pamwe nevekune dzimwe nyika mukusimudzira nyaya dzakanaka nezvakaitika pamusoro peAfrica, kugadzira kubatana pakati penyika kusimbisazve kumira kwekondinendi.
Chinangwa chechitatu chaive chekugadzira nekusimudzira kugona kwenzvimbo uye hunyanzvi mukuvandudza kwe brand uye manejimendi, kushambadzira, kusanganisira vezvenhau uye kutaurwa kwenyaya, uye kutaurirana kunoshanda.
Chechina chinangwa ndechekugadzira nyaya dzinogombedzera, kusimudzira madiki uye epakati Enterprises (SMEs) kugona uye kukwikwidza.
Chinangwa cheChishanu chaive chekunzwisisa hurongwa hwemaSME kuchengetedza zvikwereti uye kufambisa mukana wekuwana mari uye kuwedzera mashandiro ebhizinesi panguva yedenda reCCVID-19.